5 Minutes Week – အမဲသားကင် နှင့် နံနံပင်အစပ်သုပ်
အမဲသားကင် ၁၀ ကျပ်သား
နံနံပင် ( စဉ်းပြီး ) ၂ ဇွန်း
ငါးငံပြာရည် ၁ ဇွန်း
ဆန်ရှာလကာရည် ၂ ဇွန်း
သံပုရာရည် ၁ ဇွန်း
ငရုပ်သီးစိမ်း ၅ တောင့်
ချယ်ရီ ခရမ်းချဉ်သီး ၃ လုံး
ငရုပ်ပွနီ ( ပါးပါးလှီးပြီး ) အနည်းငယ်
ငရုပ်ပွဝါ ( ပါးပါးလှီးပြီး ) အနည်းငယ်
ငရုပ်ပွစိမ်း ( ပါးပါးလှီးပြီး ) အနည်းငယ်
အိုင်းစ်ဘတ် ဆလပ်ရွက် အနည်းငယ်
ခရမ်းရောင် ဂေါ်ဖီထုပ်(အမျှင်) အနည်းငယ်
ဂျပန် သခွားသီး ( အကွင်းလှီးပြီး) ၅ ကွင်း
ဘိရုမုန်လာဥနီ( အမျှင်လှီးပြီး ) အနည်းငယ်
ကြက်သွန်ဝါကြီး ( အမျှင်လှီးပြီး) အနည်းငယ်
ရက်ဒစ်ရှ် မုန်လာဥ ( အကွင်းလှီးပြီး) ၅ ကွင်း
မက်မွန်စေ့လှော် ၁၀ စေ့
ရေသန့် အေး ၁ ဇွန်း
၁ ။ အမဲသားကင် ကို ပါးပါးလှီးပြီး ချယ်ရီ ခရမ်းချဉ်သီး ကိုထက်ခြမ်းလှီးထားပါ။
၂ ။ နံနံပင် ၊ ကြက်သွန်ဖြူ ၊ သံပုရာရည် ၊ ဆန်ရှာလကာရည် ၊ သံလွင်ဆီ ၊ ရေသန့် အေး ၊ ဆား ၊ ငရုပ်ကောင်းမှုန့် ၊ ငါးငံပြာရည် ၊ နှင့် ငရုပ်သီးစိမ်း တို့ ကို ရောကြိတ်ထားပါ။
၃ ။ အိုင်းစ်ဘက်ဆလပ်ရွက် နှင့် ကျန်ပါဝင်ပစ္စည်းများကိုလည်း ဇလုံး တစ်လုံးတွင် ရောမွှေထားပါ။
၄ ။ အသင့်သုပ်ထားသော ဆလပ်စုံ ကို အလည်တွင်ထည့်ပြီး အသင့်လှီးထားသော အမဲသားကင် နှင့် ချယ်ရီ ခရမ်းချဉ်သီး ကိုဖြန့် ထည့်ထားပါ။
၅ ။ အသင့်ကြိတ်ထားသော နံနံပင်အစပ်ဆော့စ် ကို အမဲသားကင် ပေါ်ဆမ်းပြီး မက်မွန်စေ့လှော် အနည်းငယ်ဖြူးရျွ် အမဲသား ကင် နှင့် နံနံပင်အစပ်သုပ် ကို တည်ခင်းပါ။
Leftover Roasted Beef Salad with Spicy Cilantro Dressing.
Leftover Roasted Beef 160 g
Bird’s Eye Chili5numbers
Cherry Tomato3numbers
Sliced Red Bell Pepperalittle
Sliced Yellow Bell Pepperalittle
Sliced Green Bell Pepperalittle
Iceberg Lettucealittle
Red Cabbage Juliannealittle
Sliced Japanese Cucumber5slices
Beet Root Juliannealittle
Sliced Yellow Onionalittle
Sliced Red Radish5slices
Roasted Almond 10 numbers
Sliced some leftover Roasted Beef and then cut Cherry Tomato into half and put aside.
Combine chopped Coriander, Chopped Garlic, Bird’s Eye Chili, Lime Juice, Rice Vinegar, Olive Oil, Cold Water, Salt, Crushed Black Pepper and Fish Sauce inasmall bowl, stirring withawhisk.
Combine lettuce and remaining ingredients inalarge bowl.
Place the bed of Lettuce mixture in centre then put leftover Roasted Beef and Cherry Tomato around the plate.
Pour the Spicy Cilantro Dressing on the leftover Roasted Beef and serve with some Roasted Almond on top as garnishing.
Healthy Point for Leftover Roasted Beef Salad with Spicy Cilantro Dressing.
This Leftover Roasted Beef Salad with Spicy Cilantro Dressing is easy & healthy recipes, sometime we have some of nice and tender roasted beef like so valuable and more tasty on another day, so we better made some easy & healthy recipes at home and enjoy with our family, everyone known that roasted beef is so healthy way of donning the prime cuts of beef that no fat and oil, Spicy Cilantro Dressing also easy to make but so tasty and appetizing with those mixed salad and some Roast Beef. There is so little Olive Oil on top of the salad and cholesterol free, Rice Vinegar will help you to digest easily andatouch of Fish Sauce will make you tasty, Bird’s Eye Chili and Cilantro make you antioxidant with Garlic in rich flavor also.Rich in Vitamin with Cherry Tomato, Bell Peppers, Beet Root, Red Radish, Red Cabbage and Cucumber. And also Roasted Almond for your nutrients foraday as healthy Salad, so that salad doesn’t include any Carbohydrate for your diet or you can be go well with some gluten free bread or dairy free bread if you desire.
အမဲသားကင် နှင့် နံနံပင် အစပ်သုပ် က ပြင်ဆင်ရတာလွယ်ကူသလို ကျန်းမာရေးနဲ့ လည်းညီညွတ်ပါတယ် ၊ တစ်ခါတစ်ရံ မှာ အလွန်တန်ဘိုးရှိပြီး အရသာရှိတဲ့ အမဲသားကင် တွေ အကြောင်းအမျိုးမျိုးနဲ့ ပိုလျှံနေတတ်ပါတယ် ၊ အဲဒီ အမဲသားကင် ဟာ နောက်တစ်နေ့ မှာ ပိုပြီး အရသာပြည့်စုံနေတာလည်းအမှန်ဖြစ်တာကြောင့် ကိုယ့်အိမ်မှာ မိသားစု နဲ့ လွယ် ကူစွာပြင်ဆင်တည်ခင်းနိုင်ပါတယ်။ အမဲသားကင် ဆိုတာ အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်း အလွန်အာဟာရပြည့်စေပြီး အဆီပါဝင်မှု့လည်းနည်းပါတယ်….အမဲသား ကို ကင် မယ်ဆိုရင်လည်း အလွန်နူးညံ့ပြီး အရသာရှိတဲ့ အပိုင်းတွေကိုဘဲရွေးချယ်ရပါတယ်.. ၊ နံနံပင် အစပ်ဆော့စ် ကလည်းပြင်ဆင်ရတာအလွန်မြန်ဆန်လွယ်ကူပြီး အရသာ ကလည်းထူးခြားပါတယ်…အထူးသဖြင့် ဆလပ်စုံတွေနဲ့ အမဲသားကင် တို့ နဲ့ အလွန်လိုက်ဖက်ပါတယ် ၊ ဒီအသုပ် ထဲမှာ ဆီ အနေနဲ့ သံလွင်ဆီ အနည်းငယ်သာ ဆမ်းပြီး တည်ခင်းတာကြောင့် ပြည့်ဝဆီ လို့ ခေါ်တဲ့ ကိုလတ်စထရော လည်းမပါဝင်ပါ ၊ ဆန်ရှာလကာရည် က အစာကြေစေရန် ပံပိုးပေး ပြီး ငါးငံပြာရည် အနည်းငယ်ရဲ့ အနံ ကအစာစားချင်စိတ်ဖြစ်ပေါ်စေမှာပါ ၊ ငရုပ်သီးစိမ်း နဲ့ ကြက်သွန်ဖြူ ၊ နံနံပင် တို့ က ဆေးဘက်ဝင်တဲ့ အာနိသင်တွေရှိပြီး အနံအရသာလည်းပြည့်စုံပါတယ်…အရောင်အသွေးစုံတဲ့ သီးရွက်စုံတွေကလည်း ဗီတာမင် နဲ့ သတ္ထုဓါတ်တွေကြွယ်ဝစွာပါဝင်နေပြီး မက်မွန်စေ့လှော် လေးပါထည့်သုပ်ထားတာမို့ အာဟာရ လည်းပြည့်ဝစေပါတယ်….၊ အမဲသားကင် နှင့် နံနံပင် အစပ်သုပ် မှာ ကာဗိုဟ်ိုက်ဒရိတ် လို့ ခေါ်တဲ့ ကစီဓါတ် မပါတာကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန် ထိမ်းလို သူတွေ အတွက်လည်းသင့်တော်ပါတယ်…အကယ်ရျွ် အင်အား အဖြစ် ဖြည့်စွတ်စာအနေနဲ့ သုံးဆောင်မယ်ဆိုရင်လည်း ကစီဓါတ် နဲ့ နို့ ထွတ်ပစ္စည်းတွေမပါဝင်တဲ့ ပေါင်မုန့် ကြမ်းတစ်မျိုးမျိုးနဲ့ တွဲဖက်တည်ခင်းနိုင်ပါတယ်။